Mahita ohatra iray mahery vaika momba ny avonavon'ny olombelona isika ao amin'ny Dan. 5. Mifarana amin'ny fomba mahagaga sy mahatsiravina ilay Azo antoka ny Didy tantara. Mety hilaza ny olona iray fa nila fotoana ela i Nebôkadnezara vao nandray ny lesona nampianarina azy, saingy, fara faharatsiny, nianarany izany. Mampalahelo anefa fa tsy mba nanao tahaka izany mihitsy i Belsazara zafikeliny. Nalainy tokoa mantsy ireo kapoaka volafotsy sy volamena tao amin'ny tempolin'Andriamanitra, ka nampiasainy hampibobohana divay ny olona nasainy nandritra ny fanasambe nataony. Koa nolotoiny tamin'ny alalan'izany fihetsika izany ireo kapoaka ireo. Tena ratsy ny zavatra nataon'i Belsazara satria fanimbazimbana sy famelezana an'Andriamanitra mihitsy izany. Efa nahafeno ny kapoaky ny helony i Belsazara, ka nitondra tena tahaka ilay tandroka kely (vakio ny Dan. 8), izay namely ny fototry ny fitoerana masin'Andriamanitra any an-danitra. Koa nesorin'Andriamanitra tamin'i Belsazara mpanjaka ny fanapahana ka nomeny ho an'ny mpanjaka hafa. Hanao tahaka izany amin'ny fahavalon'ny olony amin'ny tena andro farany mihitsy koa Andriamanitra.
Nitranga tamin'ny taona 539 TlK ny tantara momba ny mpanjaka Belsazara ao amin'ny Dan. 5. Tamin'ny alin'io no nakan'ny tafika medo-persianina ny fanapahana teo .amin'i Babilona. Mampahatsiahy antsika ny sariolona ao amin'ny Dan. 2 izany. Dimbiasan'ny fanjakana faharoa volafotsy ankehitriny ilay fanjakana voalohany volamena. Maneho an'i Media sy i Persia io fanjakana volafotsy io. Mitranga araka izay nolazain'Andriamanitra ny zavatra rehetra. Voaporofo miharihary indray ankehitriny fa mifehy ny zavatra rehetra mitranga eto amin'izao tontolo izao Andriamanitra.